Shiniile Sport:Manchester United Oo Thomas Muller Ku Dalbatay Lacag rekoodh Jabis Ah, | shiniilenews.com
Tuesday, July 21st, 2015 | Posted by Shiniile
Manchester United Oo Thomas Muller Ku Dalbatay Lacag rekoodh Jabis Ah, Juventus Oo Mesut Ozil & Julian Draxler Diirada Ku Haysa Iyo Wararka Kale Ee Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda
Asalaamu Calaykum Waraxmatulaahi Wabarakaatuhu,Ciid Mubarik dhamaatiin kuna soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabihii ugu danbeeyay ee ay ka qoreen suuqa kale iibsiga ciyaartooyda, iyadoo suuqa kala iibsiga uu si rasmi ah u furmay 1dii bishii July wuxuuna hadda suuqu noqday mid xaami ah oo ay kooxuhu si wayn ugu mashquulsan yihiin inay ciyaaroty la soo wareegaan.
Waxaan idiin soo koobi doonaa warakii ugu danbeeyay ee ay wargaysyada Yurub ka qoreen suuqa kala iibisaga ciyaartoyda , masuulna kama noqon doono xaqiiqda iyo jiritaanka warkaan madama aanu idiin soo gudbin doono warkaas ay warkaysyadu ka qoreen suuqa kala iibsiga ciyaartoyda.
Aan Ku bilawnee:-
Kooxda Manchester United ayaa bangigeeda u jabinaysa saxiixa gool dhaliyaha kooxda Bayern Munich ee Thomas Muller. Kadib markii uu Van Gaal sheegay inuu si lama filaan ah ula soo wareegi doono gool dhaliye ayay Red Devils Muller ku dalbadeen 100 milyan oo euro oo udhiganta 69.5 milyan gini. Laakiin gudoomiyaha kooxda Bayern Munich ee Karl-Heinz Rummenigge ayaa dalabkan soo diiday./Sport1 oo ka soo baxda Munich.
Kooxda Juventus ayaa markale soo noolaysay rajadeeda ah inay xagaagan kooxda Arsenal kala soo wareegto kubbad sameeyaha ree Germany ee Mesut Ozil. Juventus ayaa Ozil ku doonaysa £27.8 milyan oo gini./Tuttosport.
Dhinaca kale Kooxda Juventus ayaa 25 milyan oo euro ku dalbatay xidiga kooxda Schalke ee Julian Draxler. Agaasimaha ciyaaraha kooxda Bianconeri ee Fabio Paratici ayaa Germany uduulaya. Laakiin kooxda Schalke ayaa Draxler ugu yaraan ku doonaysa 35 milyan oo euro./Goal.
Kooxda Arsenal ayaa xidiga Real Madrid ee Karim Benzema ku dalbatay 31 milyan oo gini taas oo hordhac u ah dalab wayn oo ay Gunners ka gudbinayso Benzema.Inkasta oo uu Wenger sanadkii 2013 kii ku guuldaraystay saxiixa Benzema ayuu haddana xagaagan doonayaa inuu safkiisa ku soo xoojiyo. /El Confidencial.
Bayern Munich ayaa ku sii dhawaanaysa inay dhamaystirto saxiixa Arturo Vidal iyada oo kula wareegaysa heshiis shansano ah. Bayern Munich ayaa Vidal ka soo bixinaysa lacag dhan 37 milyan oo gini./Bild /Eurosport.
Dhinaca kale maamulaha guud ee Juventus ee Giuseppe Marotta ayaa isaga oo cadaynayay in Vidal uu kooxda ka tagayo yidhi: ” Arturo Vidal waxa uu muujiyay rabitaankiisa ah inuu khibrad ka duwan helo sidii ay sameeyeen Ogbonna, Tevez iyo Pirlo”./ Officail Juventus twitter acount.
Kooxda Real Madrid ayaa ku sii dhawaanaysa saxiixa gooldhaliyaha ree Spain iyo kooxda Juventus ee Fernando Llorente. Wada xaajoodka labada kooxood ayaa horumar laga sameeyay, waxaana la filayaa in ay labada kooxood ka heshiiyaan ka hor dhamaadka todobaadkan./ Tuttosport.
Kooxda Inter Milan ayaa xiisaynaysa saxiixa halyaygii hore ee Chelsea ee Didier Drogba. 37 jirkan ayaa horeba wada xaajood ula yeeshay koox ka ciyaarta horyaalka Maraykanka./ Daily Mirror.
Kooxda Manchester City ayaa dariskeeda ay colaada wayni ka dhaxayso ee Man United kula tartamaysa saxiixa difaaca kooxda Valencia ee Nicolas Otamendi . Difaacan dhexe ayaa si wayn loola xidhiidhinayay kooxda Man United laakiin hadda waxaa tartanka soo gaashay kooxda Etihad Stadium./ Superdeporte.
Dhinaca kale gool dhaliyaha Man City ee Stevan Jovetic ayaa ku sii nagaan doona kooxdiisa Citizens kadib markii ay burbureen wada xaajoodkii u socday kooxaha Inter Milan iyo Man City./ Gazzetta dello Sport.
Kooxda Lazio ayaa isku diyaarinaysa inay kooxda Liverpool wada hadalo kala yeelato saxiixa Mamadou Sakho. Wakiilka xidiga ree France ayaa todobaadkan la kulmaya wakiilkada kooxda Inter Milan, waxayna rajaynayaan inay heshiis gaadhaan ka hor inta aanu xili ciyaareedku bilaamin./La Lazio Siamo Noi.
Kooxaha Chelsea iyo Atletico Madrid ayaa ka heshiiyay iibka Filipe Luis,wuxuuna xidigan ree Brazil dib ugu laabanayaa kooxdiisii hore ee Atletico Madrid.Atletico Madrid ayaa Filipe Luis dib ugula wareegaysa 15 milyan oo euro, wuxuuna xidigani xili ciyaareedkii uu joogay Stamford Bridge uu boos joogto ah ka waayay kooxda kowaad ee Blues./Sky Sports,AS.
Ugu danbayn kooxd AC Milan ayaa doonaysa inay xidiga Paris Saint-Germain ee Zlatan Ibrahimovic ay kula soo wareegto heshiis saddex sano ah iyada oo ku maal galinaysa 30 milyan oo euro. Milan ayaa doonaysa inay Ibro dib ugu soo celiso San Siro isla markaana ay sanadkii mushaar u siiso 7 milyan oo euro./La Republica.
Chelsea Oo Soo Bandhigtay Maaliyadeeda Cusub Ee Ay Ku Ciyaari Doonto Kulamada Ay Xili Ciyaareedka Cusub Martida Tahay Iyada Oo Maaliyadan Cusub Xidhan Doonta Kulanka Ay Barcelona USA Kula Ciyaari Doonto
Kooxda Chelsea ayaa soo bandhigtay maaliyadeeda cusub ee ay xili ciyaareedka 2015/16 ku ciyaari doonto kulamada ay martida tahay ee ay ka maqnan tahay garoonkeeda Stamford Bridge .Kooxda Blues ayaa sidii aanu horeba idiibku soo gudbinay July 16 soo bandhigtay maaliyadeeda cusub ee ay ku ciyaari doonto kulamada ay ay joogto garoonka Stamford Bridge.
Chelsea ayaa xili ciyaareedka cusub ku bilaaban doonta maaliyada cusub ee ay ku qoran tahay magaca shirkada ree Japan ee Yokohama Rubber Company, waxaana maaliyadaha cusub ee Blues lagu xardhay magaca Yokohama Tyres oo ah shirkad gaadiidka samaysa oo laga leeyahay dalka Japan.
Kooxda Chelsea ayaa 26 kii Febuary ku dhawaaqday inay heshiis xayasiinta maaliyada ah la gaadhay shirkada ree Japan ee Yokohama Rubber Company. Chelsea ayaa toban sano ku soo ciyaaraysay magaca shirkada Samsung oo ay kula jireen heshiiska maaliyad xayasiinta. Maaliyadan cusub ayayna samaysay shirkada qalabka ciyaaraha ee Adidas. Chelsea ayaa shirkada Yokohama Rubber Company la gaadhay heshiis shan sano ah kaas oo ay ku helayso 200 oo milyan oo gini.
Chelsea ayaa hadda ku sugan dalka Maraykanka oo ay kaga qayb galayso koobka ICC Cupka, waxayna July 28 la ciyaari doontaa kooxda horyaalka Yurub haysata ee Barcelona. Kulankan ayayna ciyaartoyda Chelsea xidhan doonaan maaliyada cusub ee ay maanta soo bandhigtay kooxda Blues taas oo ah maaliyada ama garamaanta ay ku ciyaari doonto kulamada ay martida tahay horyaalka Ingiriiska.
Maaliyadan ayaa ah mid cadaan ah, waxaana Blues maaliyad cadaan ah ugu danbaysay xili ciyaareedkii 2013/14 markaas oo uu Mourinho dib ugu soo laabtay Stamford Bridge. Chelsea ayaa maaliyadan cadaanka ah oo kale xidhnayd sanadkii 2012 kii markaas oo ay ku guulaysteen Champions Leaque-ga.